सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय आफूभन्दा बाहिर गए आन्दोलन चर्काउने प्रधानमन्त्री द्वारा चेतावनी - Aamsanchar
सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय आफूभन्दा बाहिर गए आन्दोलन चर्काउने प्रधानमन्त्री द्वारा चेतावनी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय आफूभन्दा बाहिर गए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
सूर्य चिन्ह हामीले पाउँछौँ। चुनाव हुन्छ नै, हामीले जित्नुपर्छ। तपाईहरु यो आत्मविश्वासका साथ लाग्नुस्, विराटनगरमा शनिबार आयोजित जनसभामा आयोग र अदालतप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘कुनै जालझेल तिकडम,षड्यन्त्र र सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ, त्यस्ता शक्तिलाई हामी पराजित गर्छौं ।
यद्यपी, प्रचण्ड–माधव पक्ष भनेर सरकारले आयोग र अदालतमा ‘सेटिङ’ गरेको भन्दै सशंकित बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन भएर छाड्ने दाबीसमेत गरे।
‘चुनावको बाटो बाहेक अरु बाटोबाट कोही प्रधानमन्त्री कोही अध्यक्ष हुन खोज्ने ? अर्को महाधिवेशन नकुरी बच्चाजस्तो मलाई अध्यक्ष चाहियो। चाहियो। भन्ने मान्छेहरु छन्’ उनले भने, ‘कार्की बैंङ्क्वेटबाट अध्यक्ष लिएर आसन ग्रहण गर्दै हिँडिरहेका छन्। कहाँको अध्यक्ष होला र ? ’
उनले प्रचण्ड-माधव पक्षलाई अरुले खेलाएको कठपुतली भएको आरोपसमेत लगाए। ‘उहाँहरुले झुक्याएर धम्क्याएर लगेकाहरू विस्तारै फिर्ता भइरहेका छन्। हामी लोकतन्त्र जोगाउन लागिरहेका छौँ’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओली उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि खनिएका छन्। उनले उपराष्ट्रपति पनि सरकारविरुद्ध भाषण गर्दै हिँडेको आरोप लगाएका छन्।